पेटबोली ...! - :: Fantasy over the Truth ::
Ananta Koirala July 22, 2017 आफ्नै कथा
शहरतिर झरेपछि थाहा भयो, बाटोको छेऊको घर घडेरीको भाउ कति धेरै हुन्छ। झन् घडेरीको तीनैतिर बाटो हुने हो भने त त्यो त सुनकै टुक्रा। बाँदर लड्ने ठाउँमा जन्मेको मजस्तोलाई भने यो तीनतिर बाटो र बीचमा घर हुँदा अनेक तनाव हुन्थे। रोडा ढुंगाले भरपुर बाटोमा कोही मान्छे चाँडोचाँडो
Ananta Koirala April 9, 2017 आफ्नै कथा
Ananta KoiralaA Student of Journalism. Worked as Online Correspondent at News Nepal Network International Pvt. Ltd., Sub-editor in Jagadamba Publication, currently working as Correspondent at pahilopost.com. Interested in Nepali movie. Like to write commentary on social issue, Journalism and literature.More Posts - Website Follow
Ananta Koirala November 20, 2016 पत्रकारिता, व्यङ्ग साहित्य, समाज, सामाजिक सञ्जाल
यता, म टाउकामाथिको टहटह जून हेर्दा मानसपटलमा आउने तिम्रो आकृतिले बेचैन बनाउँछ मलाई र आत्तिन्छु म पढेर मेरो व्यथा झार्छौ आँशु तुरुक्क भनेर म थिच्दिनँ किबोर्डमा ईन्टर र लेख्दिनँ तिम्रो नाममा कविता। उता, तिमी त्यही मेरो आकाशमाथि टहटहकिने जून हेरेर हरेक रात तड्पिन्छौ मलाइ भेट्ने चाहनामा जुनेली
Ananta Koirala November 13, 2016 आफ्नै कथा, व्यङ्ग साहित्य
मैले अलि कठोर आवाजमा भनेँ, ‘सरकार, यो गलत हुन्छ। आवेशमा नआइबक्स्योस्। यो कदम राजदरबारको लागि महँगो पर्छ। यो १७ साल होइन, जनता धेरै बुझ्ने भइसके। राजतन्त्र संकटमा पार्ने काम नगरिबक्स्योस्।’ मैतिदेवीको प्रहरी विट बाहिर म आधा होश र आधा बेहोशीको अवस्थामा थिएँ। मैले आफूलाई सम्हाल्ने कोशिस गर्दै
Ananta Koirala July 2, 2016 आफ्नै कथा, समाज
‘म कति लाचार छु भने हजुरसँगको सम्बन्धका बारेमा आफैसँग बाहेक कसैसँग बताउन सक्दिनँ।’ पुतलीसडकको क्याफे। २ बजे। क्याफे खाली खाली छ। काउन्टरमा एकजना बसेर क्याल्कुलेटरमा हिसाब गरिरहेका छन्। वेटरहरु खाली टेबल पुछ्दै, कहिले रुमाल यता मिलाउँदै, कहिले उता मिलाउँदै छन्। काउन्टरको ठ्याक्क अगाडि एकजोडी प्रेमी बसेका छन्। दुवैले
Ananta Koirala April 2, 2016 आफ्नै कथा, समाज
जतिबेला बच्चा थिइयो त्यतिबेला केटाकेटी नै थिइयो जस्तो लाग्छ के अहिले सम्झिँदा। खासमा म बच्चामा कस्तो थिएँ भनेर मलाई कसैले सोधे भने मसँग जवाफै हुन्नँ। अहँ, मलाई पटक्कै थाहा छैन म जन्मिँदा कस्तो थिएँ। बोल्न कसरी सुरु गरेँ, जन्मिँदा कसरी रोएँ, पहिलो शब्द के बोलेँ? दाँत आउने
Ananta Koirala May 28, 2015 आफ्नै कथा
आँखाले देखेसम्म हेरेँ घरको छतमा बसेर- चन्द्रमा आफ्नै प्रकाशमा चम्किरहेको थियो। घामले बिदा लिएपछि आजकाल चन्द्रमा प्रकाश छर्न आइपुग्छ। गोधुली भर्खरै मात्र बितेको थियो, सायद त्यसैले चन्द्रमाको छेउमा एउटा मात्र तारा देखिएको थियो। आफ्नो चमक बढाउँदै लगेको चन्द्रमा र छेउमा देखिएको सानो तारा देखेर सोचेँ- चन्द्रमा तिमी
Ananta Koirala February 7, 2015 आफ्नै कथा
फेब्रवरीको महिना चलिरहेको थियो। ‘सारा संसार भुलेर म तिमीमा समाहित हुन चाहान्थेँ, भए भरको प्रेम तिमीमा पोख्न चाहान्थेँ,’ मेरो शब्द यिनै थिए। ‘म हजुरमै समाहित हुन चाहान्थेँ सारा संसार भुलेर, सारा नियम मिचेर, तर विछोडको पीडाले पिरोल्छ र सबै इच्छाहरु चिहान बन्छन्,’ उनको जवाफ यस्तै थियो। धेरै
Ananta Koirala January 3, 2015 आफ्नै कथा
धेरैपटक म आफैलाई सोध्छु, म को हुँ? म के थिएँ? म किन यस्तो भएँ? के म मृतात्मा हुँ? म मा केही भावना छैनन्? वा मेरो जन्मले नै मलाई यस्तो बनायो? या म हुर्केको परिवेशले मलाई संसारको पर्बाह नगर्ने बनायो? यी प्रश्नहरु फगत मेरा लागि हुन्। अनि यो
Ananta Koirala August 22, 2014 व्यङ्ग साहित्य
२०३६ सालमा जनमत संग्रहको प्रचार प्रसार भैरहेको थियो। सुधारिएको पञ्चायत कि नसुध्रेको प्रजातन्त्र भन्नेमा व्यापक तयारी थियो। पञ्चायती शासकहरु जोडबलले पञ्चायत सुधार्छौं भन्दै उफ्रिरहेका थिए। म जन्मेकै थिइनँ। उबेलाका जिल्ला सभापति थिए। बडेमानको भुँडी भएका। उनी एउटा सेतो घोडा चढ्थे, हट् घोडा हट्। ती सभापति हाम्रो घरमा आए। घोडाबाट
मेरो नाम अनन्त कोइराला हो। म आफूलाई पत्रकारिताको विद्यार्थी भन्न रूचाउँछु। पत्रकारिताको अध्ययनकै शिलशिलामा जगदम्बा प्रकाशनमा सह-सम्पादकको रूपमा काम गर्न पुगेँ। पत्रकारिता मेरो रूचीको बिषय हो र पढाइपनि यसैमा गरेँ। पढाइ र रूची दुवैले अन्नपूर्ण पोस्ट्को अनलाइन सम्वाददाताको रूपमा जागिरे बनायो। तर ११ महिनापछि म अन्नपूर्ण पोस्टबाट पनि अलग भएँ। मेरो ब्लग मेरो छायाँ हो। यी मेरा भावना हुन्। काल्पनिकता मेरो दिमागभन्दा बाहिरको कुरो। मलाई लेखाइमा व्यंग्यात्मकता मन पर्छ तर सँधै त्यस्तो लेख्न गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यही भएर म मेरै कथा, मेरै इतिहास र पत्रकारिताका बारेमा लेख्छु :) ब्लगमा प्रस्फुटित विचार मेरा नीजि हुन् भनेर त लेख्नुपर्दैन होला।
उनी को थिईन्?
मेरो बुबा र म !!
Categories Select Category Uncategorized आफ्नै कथा पत्रकारिता भाषा व्यङ्ग साहित्य समाज सामाजिक सञ्जाल
Tweets by @anantabrt
Join 26,607 other subscribers
Suman on हात्माकथा !
Aditi on हात्माकथा-२: छुसी
हात्माकथा-२: छुसी - पेटबोली ...! on हात्माकथा !
Ananta Koirala on भूत
Sunil Nepal on भूत